A Barnstar for you!ပြင်ဆင်
အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၅ပြင်ဆင်
File:Han Htoo Lwin.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာပြင်ဆင်
သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၇:၄၅၊ ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
Thanks for contributing in Myanmar Wkipedia. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၀:၁၅၊ ၄ မတ် ၂၀၁၆ (UTC)
စီအေအီး ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်းပြင်ဆင်
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ အကယ်၍ စာမျက်နှာသည် ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်ပြီး ဖျက်ပစ်ခံလိုက်ရသော အချက်အလက်များအား နောင်တွင် ကိုးကားရန် ပြန်လည်အလိုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖျက်ပစ်လိုက်သော စီမံခန့်ခွဲသူ (အက်ဒမင်)အား ဆက်သွယ်ပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၀၅၊ ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ (UTC)
File:MC-Jalux Airport Services.png ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ် ပြဿနာပြင်ဆင်
ပုံအသုံးပြုခြင်း မူဝါဒ ကို ဖတ်ရှုပြီး ဝီကီပီးဒီးယားသို့ မည်သည့်ဖိုင်များ တင်သင့်/မတင်သင့်ဆိုသည်ကို လေ့လာပါ။ သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သိလိုသည့် မေးခွန်းများရှိပါက မီဒီယာ မူပိုင်ခွင့် မေးခွန်းများတွင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၅၅၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Share your experience and feedback asaWikimedian in this global surveyပြင်ဆင်
Thank you! --EGalvez (WMF) (talk) ၂၂:၀၁၊ ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇ (UTC)
Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyပြင်ဆင်
About this survey: You can find more information about this project here or you can read the frequently asked questions. This survey is hosted byathird-party service and governed by this privacy statement. If you need additional help, or if you wish to opt-out of future communications about this survey, send an email through EmailUser function to User:EGalvez (WMF). About the Wikimedia Foundation: The Wikimedia Foundation supports you by working on the software and technology to keep the sites fast, secure, and accessible, as well as supports Wikimedia programs and initiatives to expand access and support free knowledge globally. Thank you! --EGalvez (WMF) (talk) ၁၉:၃၉၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၇ (UTC)
၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။